Zimbabwe: Zimtrade Urges Firms to Penetrate Maputo - allAfrica.com
By Jennifer Mufamba-
ZIMTRADE says Zimbabwean businesses can take advantage of their proximity to Mozambique to penetrate the neighbouring country's market, which has vast export opportunities.
"The informal sector market serves people in both middle and low income (brackets), breaks bulk and negotiates prices thereby making Zimbabwean products competing well on market as well as always being accessible," she said.
Ms Muzadzi also said 60 percent of inputs used for Mozambique's construction industry are from South Africa, yet they are more expensive compared to those from Zimbabwe.
"About 60 percent of Beira's buildings including medical homes, schools as well as warehouses were destroyed by cyclone Idai and cyclone Kenneth hence, there is a lot of work that needs to be done which requires Zimbabwe's strong contribution and representation.
"Therefore, there is a huge opportunity for Zimbabwean construction companies to partner with Mozambique as the workforce and management in the sector is sufficiently qualified hence needs to be improved," she said.
"Mozambique is prioritizing agriculture but is mostly done by small scale farmers which Zimbabwe need to take advantage of. There is limited knowledge in the market and Zimbabwe's agriculture experts can offer extension opportunities and have to supply farm technology," she said.
Top Headlines Zimbabwe Trade Mozambique
He said, "Zimbabwe is much nearer in terms of proximity to Manica.
"Manica Province is open for business and its products' recognition always exists, all you need to do is to bring them into the market and especially take advantage of the FMCG whereby most of them are imports. This provides a great opportunity for doing business in Mozambique since Zimbabwe has almost all products found in the market."